နှင်းနု ပျောက်တာမဟုတ်ဘူး ဖျောက်ထားတာတဲ့ (ဖတ်တာကြည့်လိုက်တော့) ….. - TheeSayChin
July 9, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ပြည်တွင်းသတင်း
ပည်ထဲရေးကားနဲ့ မန္တလေးဘက်ကို ခေါ်သွားတယ် …။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် မီဒီယာတွေ ဒီတခါမေးမြန်းတာခံရရင် ပြည်ထဲရေးလိမ်နေတာတွေ အစထွက်မှာစိုးလို့အောင်ဝင်းခိုင်ကို အစဖျောက်သလို ဘယ်သူမှမတွေ့နိူင်တဲ့နေရာကိုပို့ လိုက်တာ ….
အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မနက် ကျောင်းကားဖယ်ရီလေးလာတယ် Victoria လေးလဲပါလာတယ် ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် သားအငယ်ကောင်လဲ ပါလာတယ် ကျောင်းရောက်တယ် ကလေးတွေဆင်းတယ်
ဟို မုဒိမ်းကောင်လေးက Victoria လေးကိုခေါ် ကစား ပြီးတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်တယ် ဒါကို သိတဲ့ ဟိုမသာမ နှင်းနုက ကောင်လေးကိုဆူလိုက်တယ် victoria လေးကိုရေဆေး ပြီးတော့မုဒိမ်းကောင်ရဲ့အမေဒေါ် ဥမ္မာလှိုင်ကိုပြောပြလိုက်တယ်။
ဒါကို ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်သိတော့ဥမ္မာလှိုင်ကကားမောင်းဖို့ခေါ်ထားတဲ့အောင်ကြီးကိုကျောင်းခန်းဧည့်သည်တွေ့ခန်းမှာထိုင်စောင့်ခိုင်းလိုက်ပြီးဂွင်ဆင်တယ် ဒီကိစ္စကို သူ့လင် ဟို ရဲကလဲသိတယ်။
နှင်းနု နင်က Victoria လေးကို ရေ ဘယ်နှခါ ဆေးတာလဲက အစ သိနေတယ်။ နောက်ြပီး နီလာအေး နင်တို့ကို မီဒီယာတွေမေးလို့ဖြေနေတာတွေက ငါကြားရမြင်နေရတာ အရမ်းရီစရာကောင်းနေတယ် နှင်းနု နင်တော်တော် စောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့အပြင် မျက်နှာပြောင် တော်တော်တိုက်တာပဲ ။ နှင်းနုရေ … ငွေ သိန်း ၃၀၀ ဆိုတာ ခုခေတ်မှာဘာမှလုပ်မရဘူး ငပိန်းမရဲ့ …
နင်သာဖော်လိုက်ရင် ပြည်သူတွေ တယောက်တကျပ်ဝိုင်းလှူတောင် နင်သူဋ္ဌေးဖြစ်တယ် ကောင်မရဲ့ ။ ဟို သူတောင်းစားကြီး ပညာနဲ့ ဥမ္မာလှိုင် နင်တို့ ဒီကိစ္စကို သိသွားတဲ့အချိန်မှာ ရုံးခန်းထဲမှာ ငွေထောင်ချီပြီး CID ကိုထိုးကြွေး
လိုက်ရလို့ ပြဿနာတွေဖြစ်ပျက်နေတာတွေကရော မသိဘူးများမှတ်နေလား ဒီကြားထဲ စောက်ရဲတွေကလဲ အမှုကိုလိမ်တယ် မဒိန်းကောင် ရဲ့အဖေကလဲ ဘယ်လောက်တောင် မျိုစို့ထားလဲဆိုတော့ သူ့သားတွေအတွက်ဘယ်လောက်ကုန်ကုန်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းမယ်တဲ့ …။
ခုတော့ အောင်ဝင်းခိုင်ကိုဖွတ်သလို နှင်းနုကိုလည်းဖွတ်ထားလိုက်တာ။ ပြည်သူတွေ သိထားဖို့ က ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုမပေါ်စေရဘူး စိတ်ထဲယုံကြည်ထားလိုက်ပေတော့ ! အောင်ကြီးဆိုတဲ့ကားဒရိုင်ဘာဟာ ထိုးကြွေးခံရတဲ့ ပွန်းတကောင်ပဲ ။ ဘုမသိ ဘမသိ တန်ဆာခံလိုက်ရရှာတယ်။ ခုလည်း တရားခံအမည်တပ်ခံ အောင်ကြီးဆိုသူ ဒရိုင်ဘာကို အမျိုးမျိုးခြိမ်းခြောက်ပြီး ဝန်ခံခိုင်းနေတယ်လို့ သိရတယ် …။
ပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်လာတာနဲ့ တကယ့်ဒီမိုကရေစီရပြီ ထင်နေကြတယ်။ တကယ်တမ်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်အာဏာရှင်တွေ လက်အောက်က ရုန်းကန်တိုးထွက်နေရဆဲပါ။
တရားမျှတခြင်းတွေမရှိတဲ့ စစ်ဝါဒီတွေခုချိန်ထိကြီးစိုးနေဆဲပါ။ စစ်ဖိနပ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင် ပေးကြပါ …။
ဒီလိုကလေးငယ်လေးကနေ အမယ်အိုကြီးတွေအထိ မုဒိမ်းမှု့ဖြစ်နေတာတွေကို မထိန်းသိမ်းနိူင်တဲ့ ပြည်ထဲရေးဟာ အာဏာရူးတွေရဲ့အသုံးချခံဆိုတာပြည်သူတိုင်းလည်းသိနေကြပါပြီ …။
အစိုးရကိုလူယုတ်မာအဖွဲ့တွေဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာနေပြီဆိုတာပြည်သူတွေ သိထားကြပါ။ ၂၀၀၈ ခြေဥကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိူင်မှ အာဏာရူးတွေလက်ကနေတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်နိုင်ပါ လိမ့်မယ် နော် … ။ ။
နှငျးနု ပြောကျတာမဟုတျဘူး ဖြောကျထားတာတဲ့ (ဖတျတာကွညျ့လိုကျတော့) …..
ပညျထဲရေးကားနဲ့ မန်တလေးဘကျကို ချေါသှားတယျ …။
ရှငျးရှငျးပွောရရငျ မီဒီယာတှေ ဒီတခါမေးမွနျးတာခံရရငျ ပွညျထဲရေးလိမျနတောတှေ အစထှကျမှာစိုးလို့အောငျဝငျးခိုငျကို အစဖြောကျသလို ဘယျသူမှမတှနေိူ့ငျတဲ့နရောကိုပို့ လိုကျတာ ….
အခငျးဖွဈတဲ့နမေ့နကျ ကြောငျးကားဖယျရီလေးလာတယျ Victoria လေးလဲပါလာတယျ ဒျေါဥမ်မာလှိုငျ သားအငယျကောငျလဲ ပါလာတယျ ကြောငျးရောကျတယျ ကလေးတှဆေငျးတယျ
ဟို မုဒိမျးကောငျလေးက Victoria လေးကိုချေါ ကစား ပွီးတော့ လုပျခငျြတာလုပျလိုကျတယျ ဒါကို သိတဲ့ ဟိုမသာမ နှငျးနုက ကောငျလေးကိုဆူလိုကျတယျ victoria လေးကိုရဆေေး ပွီးတော့မုဒိမျးကောငျရဲ့အမဒေျေါ ဥမ်မာလှိုငျကိုပွောပွလိုကျတယျ။
ဒါကို ဒျေါဥမ်မာလှိုငျသိတော့ဥမ်မာလှိုငျကကားမောငျးဖို့ချေါထားတဲ့အောငျကွီးကိုကြောငျးခနျးဧညျ့သညျတှခေ့နျးမှာထိုငျစောငျ့ခိုငျးလိုကျပွီးဂှငျဆငျတယျ ဒီကိစ်စကို သူ့လငျ ဟို ရဲကလဲသိတယျ။
နှငျးနု နငျက Victoria လေးကို ရေ ဘယျနှခါ ဆေးတာလဲက အစ သိနတေယျ။ နောကျွပီး နီလာအေး နငျတို့ကို မီဒီယာတှမေေးလို့ဖွနေတောတှကေ ငါကွားရမွငျနရေတာ အရမျးရီစရာကောငျးနတေယျ နှငျးနု နငျတျောတျော စောကျကငျြ့မကောငျးတဲ့အပွငျ မကျြနှာပွောငျ တျောတျောတိုကျတာပဲ ။ နှငျးနုရေ … ငှေ သိနျး ၃၀၀ ဆိုတာ ခုခတျေမှာဘာမှလုပျမရဘူး ငပိနျးမရဲ့ …
နငျသာဖျောလိုကျရငျ ပွညျသူတှေ တယောကျတကပျြဝိုငျးလှူတောငျ နငျသူဋ်ဌေးဖွဈတယျ ကောငျမရဲ့ ။ ဟို သူတောငျးစားကွီး ပညာနဲ့ ဥမ်မာလှိုငျ နငျတို့ ဒီကိစ်စကို သိသှားတဲ့အခြိနျမှာ ရုံးခနျးထဲမှာ ငှထေောငျခြီပွီး CID ကိုထိုးကွှေး
လိုကျရလို့ ပွဿနာတှဖွေဈပကျြနတောတှကေရော မသိဘူးမြားမှတျနလေား ဒီကွားထဲ စောကျရဲတှကေလဲ အမှုကိုလိမျတယျ မဒိနျးကောငျ ရဲ့အဖကေလဲ ဘယျလောကျတောငျ မြိုစို့ထားလဲဆိုတော့ သူ့သားတှအေတှကျဘယျလောကျကုနျကုနျလိုကျပွီးဖွရှေငျးမယျတဲ့ …။
ခုတော့ အောငျဝငျးခိုငျကိုဖှတျသလို နှငျးနုကိုလညျးဖှတျထားလိုကျတာ။ ပွညျသူတှေ သိထားဖို့ က ဗဈတိုးရီးယားလေးအမှုမပျေါစရေဘူး စိတျထဲယုံကွညျထားလိုကျပတေော့ ! အောငျကွီးဆိုတဲ့ကားဒရိုငျဘာဟာ ထိုးကွှေးခံရတဲ့ ပှနျးတကောငျပဲ ။ ဘုမသိ ဘမသိ တနျဆာခံလိုကျရရှာတယျ။ ခုလညျး တရားခံအမညျတပျခံ အောငျကွီးဆိုသူ ဒရိုငျဘာကို အမြိုးမြိုးခွိမျးခွောကျပွီး ဝနျခံခိုငျးနတေယျလို့ သိရတယျ …။
ပွညျသူတှကေ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအစိုးရတကျလာတာနဲ့ တကယျ့ဒီမိုကရစေီရပွီ ထငျနကွေတယျ။ တကယျတမျးက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက စဈအာဏာရှငျတှေ လကျအောကျက ရုနျးကနျတိုးထှကျနရေဆဲပါ။
တရားမြှတခွငျးတှမေရှိတဲ့ စဈဝါဒီတှခေုခြိနျထိကွီးစိုးနဆေဲပါ။ စဈဖိနပျအောကျကလှတျမွောကျဖို့ အတှကျ ပွညျသူတှအေားလုံးပါဝငျ ပေးကွပါ …။
ဒီလိုကလေးငယျလေးကနေ အမယျအိုကွီးတှအေထိ မုဒိမျးမှု့ဖွဈနတောတှကေို မထိနျးသိမျးနိူငျတဲ့ ပွညျထဲရေးဟာ အာဏာရူးတှရေဲ့အသုံးခခြံဆိုတာပွညျသူတိုငျးလညျးသိနကွေပါပွီ …။
အစိုးရကိုလူယုတျမာအဖှဲ့တှဝေိုငျးဝနျးဖိအားပေးတိုကျခိုကျလာနပွေီဆိုတာပွညျသူတှေ သိထားကွပါ။ ၂၀၀၈ ခွဥေကိုအမွနျဆုံးပွငျဆငျနိူငျမှ အာဏာရူးတှလေကျကနတေိုငျးပွညျလှတျမွောကျနိုငျပါ လိမျ့မယျ နျော … ။ ။
← “ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရဲ့ မီဒီယာ မိတ်ဆက်ပွဲ
မျက်နှာကိုကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိမရှိ သိနိုင်မယ့်နည်း(၈)နည်း →
ကို နေ ထက် လင်း ဦး ဆောင် သည့် စစ် ဘေး ရှောင် ပြည် သူ များ ထောက် ပံ့ ကူ ညီ ရေး နှင့် ကိုဝေ ဠု ကျော် ( ဝေ ဠု ကျော် ဖောင် ဒေး ရှင်း ) မှ ရ ခိုင် စစ် ဘေး ရှောင် ပြည် သူ များ ဆီ သို့ အ ဝတ် အ ထည် များ ပို့
လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရသူ ည မကူးခင် ခိုးမှု ထပ်မံ ကျူးလွန် သဖြင့် ဖမ်းဆီး